राजनीति Archives - Prateek Nepal
प्रचण्ड र नेपालबीच गोप्य भेटवार्ता, ओलीलाई ठुलै झ’ट्का लाग्न सक्ने ? देउवा मख्ख
August 1, 2021 Ramash kunwar
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकिरहेका बेला प्रचण्ड र नेता नेपालबीच आइतबार बिहान भेटवार्ता भएको प्रचण्ड निकट स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलहरूलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका बेला एमाले वरिष्ठ नेता […]
ओलीमाथि एमालेकै नेताले लगाए यस्तो ग’म्भीर आ’रोप, साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाइदिने चेता’वनी !
काठमाडौं। नेकपा एमालेमा वि’वाद समाधानका लागि दूई पक्षहरुको पहल जारी रहेका बेला अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीमाथि ग’म्भीर आ’रोप लागेको छ । नेता मेटमणि चौधरीले अध्यक्षमा ओलीमाथि एमाले धूलोपिठो पार्न लागिपरेको आ’रोप लगाएका हुन् । एमाले धूलोपिठो भएमा सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन सकिने उनको भनाई थियो । देश, संविधान र कम्युनिष्ट आन्दोलनको खातिर ओली बिनाको एमाले निर्माणमा […]
माधवको दूत बनेर बालकोट पुगेका भीम रावल खि’न्न हुँदै फर्किए !
August 1, 2021 August 1, 2021 Ramash kunwar
काठमाडौँ / नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका नेताहरू भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि निरा’श भएका छन् । शनिबार रावल र पाण्डेले पार्टी एकताको पहलस्वरुप माधव नेपाल र ओलीलाई भेटेका हुन् । भेटमा नेता नेपालले ओलीसँग समान है’सियतमा मात्रै एकता हुने अडान राखेको बताइएको छ । ओली दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार […]
माओवादीले पैसाको खोलो बगाएर एमाले सांसद किनेको खुलासा, यसरी खुल्यो पोल !
काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सांसद विमला खत्री सम्पर्कमा आएकी छन् ।तीन दिनदेखि सम्पर्कविहीन भनिएकी दाङ ‘ख’ उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित विमला उपचार गराइरहेको अवस्थामा भेटिएकी हुन् । नेपालगन्जबाट उपचार गरेर उनी बुटवल फर्किसकेकी छन् । तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित विमलाले एकता भंग हुँदा माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् । उनी पार्टी एकीकरण अगाडि एमाले भए पनि माओवादी रोजेपछि विभिन्न […]
देउवा सरकारको फेरि हुनेभयो चौतर्फी वाहीवाही, उज्यालो नेपालका नायक कुलमानलाई यति ठूलो जिम्मेवारी सुम्पिने तयारी !
काठमाडौँ / नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुुर देउवा नेतृत्वको सरकारको फेरि एकपटक चौतर्फी प्रशंसा हुने संकेत देखिएको छ । नेपाललाई लोडसेडिंग मुक्त गराएर उज्यालो नेपालको नायकको उपाधी पाएका कुलमान घिसिङलाई पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने तयारी भित्री रुपमा सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ल्याउने […]
‘गफाडी रवीन्द्र, ठेकीमा गोबर भरेर घिउ बेच्ने कुरा गरे’
काठमाडौं- केहिदिन यता विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र चर्चा र विवादको केन्द्रमा छन् । उनको दस्तावेज र प्रस्तावलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस तातेको छ । देशव्यापी माहोल तताएको उनको प्रस्तावलाई नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले व्यंग्य गरेका छन् । पाण्डेले व्यंग्य गर्दै विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले घिउ बेच्ने गफ दिएर गोबर बेच्न […]
एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको खुलासा !
July 31, 2021 Ramash kunwar
काठमाडौँ / नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले अमेरिकी मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता भइसकेको दावी गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै सांसद रावलले तत्कालीन मन्त्रीबाट एमसिसी कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको र त्यसको प्रतिलिपि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न आग्रह गरे । उनले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको सम्झौता सँगै अरु थुप्रै गोप्य […]
एमसीसी पास गरेर नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ !
काठमाडौँ / नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिकी सहयोग नियोक (एमसीसी) पास भएपछि मात्रै पूर्णता पाउने भएको छ ।प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पालामा एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको र कान्र्यान्वयन गर्ने म्याद अन्तिम अवस्थामा पुगेको भन्दै पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र पार्टी पदाधिकारी बैठकमा बताएका छन् । एमसीसीमा हस्ताक्षर यो […]
आफैँले गठन गरेको टिमले सर्वोच्च नै हल्लाउने यस्तो निष्कर्ष निकालेपछि झ’स्किए प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र !
July 30, 2021 Ramash kunwar
काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलिया हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्र’ष्टाचार एवम् बिचौलियाहरूबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा […]
भोली राजनीतिमा उथलपुथल हुदैँछ ? अध्यक्ष ओलीले नेता कार्यकर्तालाई दिए यस्तो निर्देशन
काठमाडौँ / नेकपा एमालेको राजनीतिमा भोली वारपार हुने भएको छ । इतिहास बोकेको नेकपा एमालेभित्रको रडाकोले देशको राजनीतिमा नै उथलपुथल ल्याएपछि ओलीले भोली पार्टी भित्रको वि’वाद वारपारका लागि नेताकार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता हुने नहुने शनिबार सम्म वारपार गर्न निर्देशन दिएका छन् । पार्टी कार्यलय थापाथली पुगेर अध्यक्ष […]
लाउरेकी श्रीमती भगाएका खलासी र स्मृती एउटै कोठामा रगेंहात भेटीएपछी खुल्यो यस्तो रहस्य , स्मृतीले रुदै यसो भन्न थालिन …..
भिसा आएर काठमाडौं हिंडेका श्रीमानको महाकालीमा ब्ये’पत्ता , नभेटिंदा श्रीमती बे’होस्, आमा अ’र्धचेत अवस्थामा
तीन तले पक्की घरको एक तला जमिन मुनी भा’सियो
अविवाहित हुँ भनेर कतारमा गर्भवती बनाएर नेपाल फर्किएका प्रेमी कता हराए ? ७ महिनाको ग’र्भ बोकेर खोज्दै नेपाल आइन् यि युवती (भिडियो हेर्नुस्)